Bogga ugu weyn Bangiyada ugu Fiican Alabama 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah oo maaliyadeed, kaydkaagu wuu ku ilaalin karaa. Mid ka mid ah xeerka caanka ah ee lacagta ayaa sheegaya - lacag badbaadi maanta iyo lacag ayaa ku badbaadin doonta berri.
Si aad hantida ugu dhisato kayd, waxaad u baahan tahay inaad samaysato xiriiryo bangi oo wanaagsan. Ama ha ahaato keydinta, lacagaha gurmadka dhigashada, ama lacag uun la amaahiyo, waxaad u baahan tahay bangi bixiya qiime macquul ah. Iyo, maqaalkan bangiyada ugu fiican Alabama wuxuu ururiyaa bangiyada ugu sarreeya Alabama oo bixiya adeegyo kala duwan oo ku habboon baahidaada maaliyadeed mar kasta.
Iyada oo leh in ka badan 156 bangi oo ku yaal Alabama, xulashada bangiga ugu fiican si uu lacagtaada u haysto, amaah u helo, ama xitaa u helo koonto jeeg si aad u bixiso biilasha way adkaan kartaa.
Markaad dooranayso bangi wanaagsan Alabama, waa inaad fiirisaa khidmadaha koontada, dulsaarka, iyo deebaajiga ugu yar. Arrimahan ayaa la tixgelinayaa marka la dooranayo bangiyadan sare. Jadwalka tusmada hoose wuxuu iftiiminayaa sida ay bangiyadaani u bixiyaan adeeggooda cajiibka ah.
Waa kuwee Bangiga Number 1 ee Alabama?
Iyada oo leh boqolkiiba sanadlaha ah oo ah 0.60% iyo deebaajiga ugu yar ee $ 0, Hantida Smart ayaa ka fikireysa in Ally Bank uu yahay bangiga lambarka 1 ee Alabama.
Ally waa JPMorgan-Chase ee Ameerika. Waxay bixisaa APY -da ugu fiican oo aan lahayn wax khidmad ah ama ugu yar iyo adeeg macmiil oo weyn.
Waa kuwee Bangiyada ugu Kalsoonida badan Alabama?
Bangiga CIT wuxuu leeyahay sicirrada kaydka ugu fiican halka BBVA ay bixiso sicirka suuqa lacagta ugu fiican. Iyo, waxay ka sarreysaa shaxda bangiyada ugu kalsoonida badan Alabama iyo Ameerika guud ahaan.
Immisa Xisaab Bangi ayaan uga baahanahay Alabama?
Asal ahaan, waa inaad haysataa tirada xisaabaadka aad maamuli karto oo aad la socon karto.
Xisaabaadka kala duwan waxay kaa caawinayaan inaad abaabusho oo aad gaarto yoolalkaaga maaliyadeed ee la dejiyay laakiin markay noqdaan kuwo aad u badan, aad bay u badan tahay in la maareeyo.
Markaa, haysashada akoonno bangi oo ku filan si aad si wanaagsan ugu maareyso dhaqaalahaaga waa inay noqotaa aasaaska. Su'aashu waxay tahay - imisa ayaa xisaabaadka bangiga ku filan?
Koonto keli ah oo jeegga jeeggaaga, koontada keydka, iyo koontada suuqa lacagtu waa aasaaska. Haddii loo baahdo, waxaad heli kartaa koontada keydinta caafimaadka, kaararka deynta, iyo khadadka deynta ee guriga.
Guud ahaan, tirakoobyada Khubarada ahi waxay muujinayaan in celcelis ahaan Maraykan leeyahay ilaa afar kaararka deynta ah.
Maxay yihiin Bangiyada ugu Fiican Alabama ee Lacagta Geliya?
Iyada oo ku xidhan yoolalkaaga baahida maaliyadeed, waxaa Alabama ka jira bangiyo wanaagsan oo qanciya rabitaankaaga.
XIDHIIDHKA: Bangiyada ugu Fiican Oregon 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Dhab ahaan, haddii aad hesho bangi ku siiya dhammaan waxaad u baahan tahay, waa ikhtiyaar ka fiican inaad raalli -gelin ka hesho adeegyo kala duwan bangiyada kala duwan. Bangiyada ugu sarreeya Alabama waxay bixiyaan bangiyo onlayn ah, iyo adeegyo/adeegyo bangi oo kale oo badan oo laga yaabo inay ku anfacaan.
Waxaa ka mid ah bangiyada ugu sarreeya Alabama, waxaad ku qasban tahay inaad hesho bangiyo internet-ka kaliya ah, bangiyada maxalliga ah oo leh laamo yar, iyo bangiyo leh ilaa 1 laamood.
Iyada oo ku saleysan noocyada koontadooda, deebaajiga ugu yar iyo qiimayaasha, bangiyada ugu fiican Alabama waxaa ka mid ah:
#10. Markii ugu horeysay ee Jackson Bank
Kani waa mid ka mid ah bangiyada ugu sarreeya Alabama. Macaamiishu waxay u baahan yihiin inay dhigaan ugu yaraan $ 500 akoonnada Hubinta Joogtada ah. Kaydkan ugu yar, macaamiisha looma baahna lacag bille ah oo ah $ 6.
Marka lagu daro koontada jeegga joogtada ah, First Jackson wuxuu kaloo u oggolaanayaa shaqsiyaadka inay maamulaan koontada kaydka iyo xitaa koonto kuu oggolaanaysa inaad keydsato kaliya dukaamaysiga fasaxa.
Koontada hubinta Val-You waxay soo jiidataa $ 8 bishiiba oo soo jiidata adeegyo dheeri ah sida caymiska shilka aasaasiga ah iyo adeegga hubinta.
Waxay bixisaa dulsaar ah 0.60% APY kadib 24 bilood iyo 30 bilood dulsaarka ugu yar ee $ 1k. 91 maalmood, ApY waxay hoos ugu dhacday 0.20%.
#9. Bangiga Muwaadiniinta Kowaad
Bangigan Alabama wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay furaan xisaabaadka jeegga iyo kaydka. Xisaabaadkaan waxaa lagu furi karaa lacag la'aan bishiiba. Markaa, marka ugu horreysa ee deebaajiga ah $ 50, waxaad ku furan kartaa koonto jeeg bilaash ah bangiga koowaad ee muwaadinka.
Kani wuxuu helaa kaarka deynta fiisaha ee bilaashka ah, marin u helka bangiga onlaynka ah iyo biilka mushaharka aan xadidnayn.
Intaa waxaa dheer, bangiyada muwaadiniinta koowaad waxay macaamiisha siiyaan dhowr nooc oo caymis ah. Dalabyada waxaa ka mid ah Mulkiileyaasha Guryaha, kireystayaasha, baabuurta, iyo caymiska dalladda. Si aad ugu raaxaysato 0.25% APY koonto ganacsi oo leh dhigaal ugu yar oo ah $ 500, ka fur koonto khadka tooska ah Muwaadiniinta Koowaad hadda oo leh faahfaahinta soo socota:
Cinwaanka guriga ee hadda
Kaarka amaahda ama kaarka bangiga ee deebaajigaaga bilowga ah.
#8. Bangiga FNB
Kani waa mid ka mid ah bangiyada ugu sarreeya Alabama. Waxay bixisaa koonto jeeg ah oo aan lahayn wax kharash ah bil kasta oo ay weheliso alaabada kale ee maaliyadeed si loo gaaro hadafkaaga maaliyadeed.
Si aad uga furato koonto jeeg oo lacag la'aan ah FNB, waxaad u baahan tahay inaad si toos ah u codsato koonto bangiga FNB. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad dhigato ugu yaraan $ 50 taas oo kuu keeni karta $ 5, caymiska xatooyada aqoonsiga.
XIDHIIDHKA: Habka ugu Wanaagsan ee Loo Maalgashan Karo $ 10,000: Siyaabo Cusub Oo Lagu Kordhiyo Ilaa 5x Lacagtaada
Haddii aad u baahan tahay deyn sabab kasta ha ahaatee, FNB waxay bixisaa adeegyo amaah oo taxane ah oo u dhexeeya deyn guri ilaa baabuur, amaah shaqsiyeed iyo mid beereed.
#7. Bangiga Liberty
Liberty waxay bixisaa koonto kayd ah iyo koonto hubin oo joogto ah. Koontada keydkeeda waxay kasbataa dulsaar waxayna u baahan tahay kaliya $ 25 halka koontadeeda joogtada ahi soo jiidato khidmad bille ah $ 5 mar kasta oo dheelitirkaagu hoos uga dhaco $ 400.
Nasiib darrose, $ 100 kasta oo hoos u dhaca dheelitirkaaga maalinlaha ah wuxuu soo jiitaa $ 1 korodh ah khidmadda adeeggaaga billaha ah.
Sidoo kale, macaamiisha Liberty waxay macaamiisheeda u siiyaan adeegyo amaah shakhsiyeed in kasta oo ay jiraan waxoogaa xaddidaad ah oo ku saabsan kaararka deynta. Si aad ugu raaxaysato dulsaarka 0.40% deebaajiga 30-bilood ah, codso koonto shaqsi ahaan.
Tani waa mid ka mid ah bangiyada ugu fiican Alabama oo hadda ah bangiga ugu fiican gobolka. Iyada oo xarunteedu tahay Birmingham, BBVA waa bangiga ugu fiican ee degaanka sababtoo ah deebaajiga ugu yar ee koontada hubinta.
Sidoo kale, BBVA wax lacag ah kama qaado koontada caadiga ah; si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad dhigato deebaajiga hore ee $ 25 si aad u furato xisaabaadka jeegga.
BBVA waxay bixisaa dulsaar aad u hooseeya (0.1%) laakiin waxay tan ka dhigtaa xisaabteeda dhigaalka ee aadka loo heli karo oo toos ah. BBVA ayaa weli ah mid ka mid ah bangiyada ugu fiican Alabama oo leh shabakad adeegsade-saaxiibtinimo ah, si sahlan loo isticmaali karo apps mobaylada, iyo xirfadaha adeegga macaamiisha ee wanaagsan.
#5. Bangiga CIT
CIT waxay bixisaa dulsaar hoose laakiin weli ah bangiga ugu fiican kaydinta Alabama. Waxay siisaa macaamiisha ikhtiyaarro kaydin oo kala duwan si ay u kala doortaan xisaabta suuqa Lacagta, koontada kaydka ee wax-soosaarka sare leh, iyo ciqaab/11 bilood CD.
Koontada wax-dhisaha kaydka ayaa bixisa 0.45% APY. Adeegyada kale ee laga yaabo inaad ku raaxaysato waxaa ka mid ah abka moobilka adag kaas oo kuu ogolaanaya inaad aragto bayaanka akoonkaaga mar walba, taariikhda wax kala iibsiga oo casri ah, iyo xataa jeegaga dhigaalka meel fog.
#4. Bangiga Dadweynaha ee Alabama
Bangigan ugu sarreeya Alabama wuxuu ugu fiican yahay dadka doonaya inay dheelitirmaan inta u dhaxaysa fududeynta iyo la -talinta maaliyadeed.
Waxay bixisaa koontada jeegeynta Plus oo aan lahayn wax ujro ah, aan lahayn baaqyada ugu yar, waana bilaash in lagu shaqeeyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad bixiso $50 si aad akoon u furto oo aad xaq u yeelato inaad hesho dulsaar dheeraad ah markaad haysato $25, 000 iyo wixii ka sareeya.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Furo Xisaab Bangi Iyo Dhammaan Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Sidaasi Sameyso
Waxa kale oo ay bixisaa dulsaar casiir leh; dhab ahaantii, waa mid ka mid ah qiimayaasha ugu cajiibka badan dalka. Isku -dheelitirka $ 25, 000, waxaad kasban kartaa 0.60% halka in ka badan $ 25, 000 xisaabaad ay kasbadaan 0.25%.
#3. Bangiyada Gobolada
Baankani wuxuu leeyahay in ka badan 1. 500 laamood oo ku baahsan dalka. Alabama kaliya, waxaa jira in ka badan 221 laamood Alabama.
Waa bangiga ugu fiican shaqsiyaadka doonaya inay dhammaan hantida hoos dhigaan hal saqaf. Waxay bixisaa xisaabaadyo hubineed oo badan, koontooyin kayd, iyo qorshayaasha amaahda guryaha. Intaa waxaa dheer, macaamiishu waxay maamuli karaan IRA -yada iyo CD -yada.
Haddii aad akoon ka furanayso onlayn, waxaad u baahan tahay inaad dhigaal hore oo ah $50 ama $5 ka samaysato laanta. Waxay bixisaa APY 0.01%. akoonkiisa LifeGreen Savings.
Bangigan ugu fiican Alabama wuxuu bixiyaa saddex nooc oo kala duwan oo ah xisaabaadka hubinta ganacsiga. Hadda waxay ugu fiican tahay ganacsiyada yaryar waxayna siisaa noocyo kala duwan oo amaah iyo adeegyo ah ganacsiyada yaryar ee Alabama oo dhan.
Waxaad u baahan tahay inaad bixiso khidmado iyo astaamo si aad ugu furato koonto jeeg ganacsi oo fudud Wells Fargo. Waxay bixisaa 2,625% dulsaar ah 30 sano oo go'an.
#1. Bangiga Ally
Ally waa bangiga lambarka 1 ee Alabama. Waxay bixisaa 0.60% APY koontooyinkeeda kaydka onlaynka ah oo leh ugu yaraan $ 0 deebaaji.
Bangiyada Ally waxay sheeganayaan in bixintani tahay 10x celceliska qaranka. Waa bangiga mobilada ee khadka tooska ah wuxuuna u fiican yahay shakhsiyaadka ku qanacsan bangiyada mobilada iyo internetka. Goorma marka la barbar dhigo Robinhood, bangiga Ally ayaa ugu fiican ujeeddooyinka maalgashiga.
Waxay siisaa 0.01% APY xisaabaadka leh ugu yaraan hadhaaga maalinle ah $15 halka xisaabaadka haya in ka badan ay soo jiitaan 000% APY.
Bangiyada ugu fiican Alabama ayaa lagu soo koobay shaxda hoose. Waxay qabtaa deebaajigooda ugu yar, nooca xisaabaadka ay bixiyaan, iyo heerka ribada.
Heerarka dulsaarka/ APY
10 Markii ugu horeysay ee Jackson Bank $ 25 Kaydinta iyo Hubinta 0.20% -badbaadinta
9 Bangiga Koowaad ee Muwaadiniinta $ 50 Kaydinta iyo Hubinta $0
8 Bangiga FNB $ 100 Koontada Keydka iyo Hubinta nil
7 Bangiga Liberty $ 500 Kaydinta iyo Hubinta 0.10%
6 BBVA $ 25 Kaydka iyo Suuqa Lacagta 0.01%
5 Bangiga CIT $ 100 Kaydinta, CD -yada, iyo IRAs 0.30% kaydka -soo -saarka
4 Bangiga Dadweynaha ee Alabama $ 50 Hubinta Koontada iyo Kaydka 0.1% $ 100
3 Bangiyada Gobollada $ 50 -online, $ 5 laan kasta Hubinta Koontada iyo Kaydka 0.1%
2 WellsFargo $ 25 Hubinta, keydinta, CD -yada iyo IRA -yada 0.1%
1 Bangiga Ally $ 100 Hubinta, Kaydinta iyo Suuqa Lacagta 0.60%
Tag Bangiyada Rates.com - Bangiyada Alabama ee ugu sarreeya
Qiimaha Penguin.com - Bangiyada ugu Fiican Alabama
Smart Asset.com - Bangiyada ugu Fiican Alabama
Top 10 Koontada Kaydka Ganacsiga Wax-soosaarka Sare
Dib -u -eegista Sawir -qaadaha Portfolio
Fundrise ma sharcibaa? Dib -u -eegista Fundrise
Bangiyada ugu Fiican New York| Heerarka, Noocyada Xisaabaadka, Min. Deposit
14-ka Bangi ee ugu Wanaagsan Online Sida Chime
80 Sida ugu wanaagsan ee aad naftaada u maal gashan karto
Kaadhka Debit -ka Hore ee Famzoo U Qalmay? Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | 2022 Dib u eegid.
Kaarka Debit Prepaid ee Famzoo waxaa loogu talagalay qoysaska jecel inay carruurtoodu lacag qaataan…